Kulan looga hadlayay Amniga doorashooyinka oo lagu qabtay Jowhar - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Kulan looga hadlayay Amniga doorashooyinka oo lagu qabtay Jowhar
Kulan looga hadlayay Amniga doorashooyinka oo lagu qabtay Jowhar
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlawe Xuseen ayaa shir gudoomiyay kulanka guud ee amniga Dowlad Goboleedka Hirshabeelle, kaas oo lagu qabtay Magaalada Jowhar.
Kulanka ayaa waxaa ka qeybgalay Wasiirka Amniga Gudaha, Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Shabeellaha Dhexe, Taliyaha Guutada 3aad qeybta 27aad ee Ciidanka Xoogga Dalka, Taliyaha Hay’adda Nabad Sugida iyo Sirdoonka Hirshabeelle, Taliska Booliska, Saraakiisha Amisom ee Secter five, iyo Howlwadeenada Xafiiska Madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa kulankan muhiimka ah ee Amniga warbixin guud uga dhageystay saraakiisha Hay’adda Amniga Hirshabeelle, iyada oo kulankaan looga hadlay Amaanka deegaanada Hirshabeelle, Sameynta Howlgalo qorsheysan, adkeynta Amniga musharixiinta, iyo xaqiijinta Nabadgalyada Magaalooyinka Jowhar iyo Beleddweyne oo ay ka dhacayaan Doorashooyinka.
Saraakiisha Hay’addaha Amniga ayaa madaxwaynaha la wadaagay howlgalo qorsheysan oo Hay’adaha Amaanka sameeyeen is looga shaqeeyo nabadgalyada Caasimada iyo Guud ahaan Magaalooyinka Hirshabeelle.
Madaxweynaha ayaa ugu dambeyn Saraakiisha Amniga faray inay laba laabaan howlaha shaqo ee loo igmaday adkeeyaana amniga guud.
Previous articlePuntland oo Galmudug u dirtay Ciidamo la dagaalamaya Al-Shabaab
Next articleTaalibaan oo dumarka ka mamnuucay xilalka sare